IRejimeni eneThermomix -Iindlela zokupheka ezinempilo kunye nokutya | ThermoRecipes
Xa sisondela ehlotyeni sihlala sisenza izidlo ezahlukeneyo kwaye zokupheka ezilula Ukuze ujongeke kakuhle ngee swimsuits okanye nge bikini, yiyo loo nto kubalulekile ukwenza ukutya okufanelekileyo loo nto iphilile kwaye ilungile, kungcono kunokuba ne Thermomix.
Iiresiphi ezisempilweni Thermomix
Si buscas iiresiphi zokutyaNge-Thermomix ungenza ezo zitya zenziwe ukuba zifuthiswe, kwijusi yazo, zosiwe okanye zenze ezo zithako zezinye izitya ezizincedayo, kuba ukutya okufanelekileyo kufuneka kusoloko kukhatshwa zezona zithako zilungileyo kwaye zingenamafutha. Unokufumana apha konke okusemgangathweni zokupheka ezifanelekileyo zokutya okufanelekileyo.
Ezi ntlobo zezitya zikwacetyiswa kakhulu ukuba ziphele kwaye ezinye izitya oza kuzifumana apha zezi zokupheka ezilula zesidlo sangokuhlwa nangona ungonwabela nakutya.
I-ertyisi kunye ham
por USilvia Benito yenzayo Inyanga e-1 .
Le recipe ivela kwincwadi yeThermomix® Khathalela impilo yakho. Incwadi endiyithandayo ngenani leeresiphi ...
Ukhilimu wokuvuna (cream yemifuno)
por Elena Calderon yenzayo Iinyanga ze2 .
Yikhrimu yemifuno emnandi, ebizwa ngokuba "sisebenzisa" kuba singayenza kunye nemifuno esinayo kwi ...
Ikhekhe lesiponji elipheleleyo kunye neziqhamo, amandongomane kunye neerasentyisi
Le yeyona ikeyiki yokuqala ndiyenzayo, kodwa ndiyakuqinisekisa ukuba ayizukugqibela, ndiyayithanda! Phantse…
Iziqhamo kunye nepasta isaladi
por Elena Calderon yenzayo Iinyanga ze3 .
Namhlanje sikubonisa isitya esikhanyayo, esitsha kunye nesiqobo. Injalo nesi siqhamo kunye nepasta yesaladi. Ehlotyeni,…
Esi sesinye seziqalo esithanda kakhulu. Inye yezinto ezisisigxina kwiKrisimesi kwaye ...
Iibhasi zolwandle kwipapillote
por USilvia Benito yenzayo Iinyanga ze3 .
Le yenye yeendlela zokupheka ezihlala zisiza ukutya isidlo sangokuhlwa okanye ukutya okulula. Kukulungele ukutya iintlanzi ...
Ikrimu yeGreen Asparagus
Zange khe ndangcamla isityebi seasparagus cream! Unobumba obuhle kakhulu kwaye bukhrim ngaxeshanye kodwa ...
Naliphi na ixesha lixesha elifanelekileyo lokuqala ukuzikhathalela kancinane, nokuba kungenxa yokugqitha kweKrisimesi, ihlobo ...
por UMayra Fernandez Joglar yenzayo Iinyanga ze3 .
Le octopus ceviche yeyona ndlela ilungileyo yehlobo. Entsha, ekhawulezayo, elula kwaye elula kakhulu ... ngama-70 kcal kuphela. Yintoni egqithisile…
I-Cream yepepile ebomvu, netshizi entsha kunye neembotyi eziluhlaza
Sele uyazi ukuba ekhaya siyazithanda izithambiso, isityu kunye nesuphu. Ngeli xesha bendinezipelepele ...
I-Kiwi kunye nesaladi ye-prawn
Ubushushu behlobo busondela kwaye uzikhathalele olu hlobo lweesaladi lufezekile. Andizange ndizame ...
Ivatala yelanga Gazpacho
Hake ngemifuno ebilisiweyo
I-Banana Smoothie eStrawberry
I-puree yemveli yemifuno
I-Veggie iqanda leBurger
I-leek, i-carrot kunye ne-potato cream
Isipinatshi cream béchamel
Ukutshabalalisa iapile, ikhukhamba kunye nejusi yeseleri
Indlela yokwenza amaqanda abanjiweyo (inyathelo ngenyathelo)